Wondershare Mgbakwunye N'uba
1. Ke ofụri ofụri, nkwusa agaghi-ekwe ka eji toolbars, iFrames, pop gbasie, pop unders na oyi akwa mgbasa ozi ihe na Ibu Ibu Wondershare mgbasa ozi ihe onwunwe na-edebe a kuki na onye ọrụ si na kọmputa na-enweghị ya / ya òkè. Ọzọkwa, agaghi-ekwe ka eji downloadable adware, spyware, amanye click (kuki nri) ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ obi azum irite ikenenke ọrụ payouts. Naanị ahịa n'ihi mgbe ahịa ụzọ na gị website ga-ekwe.
2. Ị nwere ike dịkarịa ala nwere nkwalite atụmatụ maka Wondershare ngwaahịa tupu unu sonyere na Mgbakwunye mmemme mma gị na ahịa. Ọ bụrụ na ị nọgide na-enwe ngwaahịa na a kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ ego, ị ghara isonye na Wondershare Mgbakwunye mmemme.
3. Ọ bụghị ekwe na-eji ndị na-esonụ na-echebe Keywords ka akụkụ nke ha ngalaba aha, gụnyere ma na ọnweghị oke: wondershare, ijuanya òkè, wondershareware, wondershareppt2dvd, Dr.Fone. wdg
4.-adịghị ekwe ka ere nke ọ bụla n'ime Wondershare ngwaahịa na online echekwa ma ọ bụ na saịtị metụtara auction, dị ka: eBay, Amazon, wdg
Product / ọdịnaya / Ahịa Iwu:
1. Publishers na-agaghị ekwe na-ere ọ bụla nke anyị kwụsịrị ngwaahịa; ọ bụla ụgwọ ịrụpụta a ga-enwe naanị ibu ọrụ nke na-akpakọrịta nkwusa.
2. CHETA ị gaghị n'okpuru Wondershare ngwaahịa ndị ọzọ weebụsaịtị site na-agbanwe ngwaahịa aha ma ọ bụ ọbụna na-eji otu aha nke anyị na.
3. Publishers na-agaghị egbeokwu na functionalities nke anyị na ọ na-agaghị ha nkwalite ma ọ bụ na ha onwe ha na saịtị.
4. Nọgidenụ otu price ma ọ bụ ego ka Wondershare Official website, adịghị ekwe ka na-enye ndị ọzọ Kupọns, bonuses ma ọ bụ ịkpali ndị ahịa. Ọ bụla ego nkwalite nke anyị na ngwaahịa site mmekọ ga-ikike site Wondershare Software Co., Ltd. Commission maka Coupon saịtị na-enyocha on n'otu n'otu. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ọ bụla ego nkwalite atụmatụ.
5. debara aha nkwusa na-agaghị ekwe iṅomi ma ọ bụ detuo ihe ọ bụla dị iche iche nke ọdịnaya, n'ụdị ma ọ bụ ịke si ukara Wondershare webpage. Mgbanwe a ga-mere n'ime 48 awa mgbe Wondershare kọntaktị Mgbakwunye dị otú ahụ na mebiri.
6. Publishers na-adịghị ekwe ka ikele na Wondershare ụghalaahịa na ụdị, Wondershare ika gbakwunyere, nakwa dị ka misspellings na ọdịiche nke Wondershare ụdị. Ndị ọzọ nile bidding na-ekwe. Mmekọ na-agaghị agabiga onwe ha dị ka ukara Wondershare saịtị. Biko Ị na-eji "™", "®", "©" ma ọ bụ "ukara" ke mgbasa ozi ọ bụrụ na ị ejikọta gị onwe gị URL ..
Ndị ọzọ yiri Rịba ama:
1. All ikike na-echekwabara site Wondershare Software Co., Ltd. Site n'isonyere Wondershare Mgbakwunye omume, ị na-agụ okwu ndị a na ọnọdụ, ghọtara na kwetara na ha.
2. Wondershare mee ikike wepụ ihe ọ bụla Mgbakwunye na / ma ọ ghara ọrụ payouts na ha onwe ha ezi uche dabeere na Mgbakwunye omume na nnabata na usoro nke ọrụ anyị.